Awugculisekile umphakathi eMzumbe | News24
Awugculisekile umphakathi eMzumbe
UMPHAKATHI waseMzumbe awugculisekile neze ngezinsiza emphakathini wawo ikakhulukazi kuWard 10, eMakhoso naseSibanini. Ilungu lomphakathi uMnuz Phumlani Ngcobo, obengumsebenzi kamasipala osethathe umhlalaphansi, uthe akubajabulisi abahlali ukuthi osopolitiki benza konke okusemandleni abo ukuthola amavoti umakuyiwa okhethweni.
“Osopolitiki bafika ngobuningi babo bezokhankasa benze izithembiso abangazifezi. Sengihlale kulendawo iminyaka emihlanu kepha akukho shintsho engilubonayo,” kusho uMnuz Ngcobo.
UMnuz Ngcobo uthe bathenjiswa ugesi, amanzi kanye nokwakhelwa imigwaqo kepha dololo.
Uthe uma ethi ulandela udaba lukagesi kulabo abenza izithembiso utshelwe ukuthi kumele azixhumele yena ugesi emzini wakhe.
“Ngitshelwe ukuthi kumele ngikhokhe imali engango R6 000 uma ngifuna ugesi kepha ngesikhathi kukhankaswa akushiwongo lutho ngezimali ekumele sizikhokhe njengabahlali,” kusho uMnuz Ngcobo.
UMnuz Ngcobo uthe inhlangano ebusayo ayibanakanga abahlali kodwa ibazi nje uma ifuna amavoti. Uthe kuke kumfikele ukuthi umakuthiwa abantu bavotela ihlangano ephikisayo kungajani.
“Umangicabanga impela mhlampe lungaba khona ushintsho umasingavotela inhlangano ephikisayo. ngaphandle kokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya uma uhamba la emadolobeni uyabona nje ukuthi akukho okwenziwayo, amadoloba angcolile,” kusho uMnuz Ngcobo. Umkhandlu waseMzumbe uthintiwe ngaloludaba. Okhulumela umkhandlu uMnuz Trevor Khanyile uthe kubalulekile ukuveza isithombe ekuyisona ngendawo yakuWard 10.
“Le wodi ingelinye lamawodi elinakho konke, inkinga esijwayele ukuba nayo eyokufika kwezakhamuzi ezintsha endaweni,” kusho uMnuz Khanyile. Uthe umasipala udaba lukagesi ulikhuluma no-Eskom okuyibona ababonayo ukuthi bangakwazi ukuwufaka bagcinephi.
“Ngingaqinisekisa ukuthi umsebenzi ka-Eskom wokufaka ugesi ezindlini ngohlelo lawo usaqhubeka kuyona lendawo,” kusho uMnuz Khanyile.
Uqhubeke wathi u-Eskom ubikile kumasipala ukuthi lendawo inezakhamuzi eziningi kodwa amandla abanawo awanele, nokuthi uma u-Eskom usunamandla anele bazoqhubekela phambili beye ezindaweni abangafinyelelanga kuzona.
“Njemgamanje kwaMgayi izindlu ezilinani elingu 600, ezingu 500 eHlokozi kanye nezingu 500 endaweni yaseCabhane ezizothola ugesi, iwona amandla u-Eskom anawo okwamanje esivumelene ukuthi zizoxhunyelwa ugesi,” kusho uMnuz Khanyile.